महिला–पुरुष किन आफ्ना भन्दा बा'हिरकासँग ओछ्यानमा बढी सु'ख'प्राप्ति खोज्छन् ? - Mitho Khabar
महिला–पुरुष किन आफ्ना भन्दा बा’हिरकासँग ओछ्यानमा बढी सु’ख’प्राप्ति खोज्छन् ?
October 23, 2020 mithokhabarLeaveaComment on महिला–पुरुष किन आफ्ना भन्दा बा’हिरकासँग ओछ्यानमा बढी सु’ख’प्राप्ति खोज्छन् ?
काठमाडौं । किन मानिसहरूले आफ्ना पा’र्टनरहरूसँग भौ’तिक स’म्बन्ध राख्न रुचि राख्दैनन् ? किन मानिसहरुलाई व’यस्क भि’डियो हेर्ने, ह’स्त’क्रि’या गर्ने वा आफ्नो श्रीमती भन्दा बाहिर अरु कसैसँग स’म्बन्ध राख्न मन लाग्छ ।
के यसको पछाडि हाम्रो मनोविज्ञानको केही सम्बन्ध छ ? यदि हो भने के कारण हुन सक्छ ? म तपाईबाट साँच्चिकै जवाफ जान्न चाहन्छु । डा. योगेश टण्न्डनको उत्तरः यो पक्कै पनि मनोवैज्ञानिक कारण हो । विवाहको केही बर्ष पछि मानिसहरू प्रायः यस्तो समस्याको सामना गर्दछन् ।
त्यसकारण यसलाई पार गर्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईंको भौ’तिक सु’ख जीवनलाई रोचक बनाउनु हो । एक सुगन्धित मैनबत्ती, मन्द प्रकाश, संगीत वा अन्य शैली प्रयोग गरेर भौ’तिक जीवनमा नयाँपन ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् । तपाईं आफ्नो सा’थीसँग यो विषयमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं आफ्नो नी’रस भौ’तिक गतिविधि संग केहि नयाँ प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ । रसमय हुनेछ ।
पूजा हेगडेले क्यान्सरबाट पीडित दुई बच्चाहरूको लागि २. lakhs लाख रूपैयाँ सहयोग गर्‍यो
आज २०७७ कार्तिक ८ गते शनिबारकाे राशिफल आज यी राशिमाथि शनिदेव को कृपा रहने छ । हेर्नुहोस :
October 23, 2020 mithokhabar